Emily in Paris (Season 1) ၊ အပိုငျး (၉) | MM Movie Store
ကဲ …..အမျမလီ နဲ့ ပွငျသဈကို အလညျသှားရအောငျဗြာ။အမျမလီဆိုတာကတော့ ပွငျသဈစကားမပွောတတျတဲ့အမရေိကနျနိုငျငံသူ တဈယောကျပါ။သူ ဘာလို့ ပွငျသဈကို ရောကျသှားရတာလဲဆိုတော့သူ့ သူဌေးမက ရုတျတရကျ ကိုယျဝနျရှိလာတဲ့အခြိနျမှာပွငျသဈရုံးခှဲကို မသှားနိုငျတဲ့အတှကျ အမျမလီကိုစလှေတျဖို့ ဖွဈလာပါတော့တယျ။
ဒီတော့ အမျမလီတဈယောကျ ပွငျသဈမှာ ကွုံရမယျ့အလှဲလှဲ အခြျောခြျောလေးတှကေို တသောသောနဲ့ ရယျမောရငျးပွငျသဈ နဲ့ အမရေိကုနျရဲ့ ကှာခွားတဲ့ လူနမှေုဘဝတှကေို မွငျရပါမယျ။ပွငျသဈရဲ့လှပတဲ့ရှုခငျးတှနေဲ့ အတူ အခဈြ၊ လိငျကိစ်စ၊စီးပှားရေး၊ လူမှုရေး ဒါတှကေိုပါ လလေ့ာခှငျ့ရမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
မငျးသမီးရဲ့ဖကျရှငျတှကေလညျးမိနျးကလေးတိုငျး သဘောတှစေ့ရာ ဖွဈမှာပါ။အပိုငျးအနနေဲ့ကတော့ ၁၀ ပိုငျး ရှိပါတယျ။အတှဲ – ၁ အနနေဲ့ ထှကျလာတာ ဖွဈတဲ့အတှကျအတှဲ – ၂ ဆကျလာဦးမယျ့သဘောပါ။
IMDb – 7.4/10 ရထားပွီး လတျတလောမှာလူကွိုကျမြားနတေဲ့ နာမညျကွီး စီးရီးတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကဲ …..အမ်မလီ နဲ့ ပြင်သစ်ကို အလည်သွားရအောင်ဗျာ။အမ်မလီဆိုတာကတော့ ပြင်သစ်စကားမပြောတတ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသူ တစ်ယောက်ပါ။သူ ဘာလို့ ပြင်သစ်ကို ရောက်သွားရတာလဲဆိုတော့သူ့ သူဌေးမက ရုတ်တရက် ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာပြင်သစ်ရုံးခွဲကို မသွားနိုင်တဲ့အတွက် အမ်မလီကိုစေလွှတ်ဖို့ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
ဒီတော့ အမ်မလီတစ်ယောက် ပြင်သစ်မှာ ကြုံရမယ့်အလွဲလွဲ အချော်ချော်လေးတွေကို တသောသောနဲ့ ရယ်မောရင်းပြင်သစ် နဲ့ အမေရိကုန်ရဲ့ ကွာခြားတဲ့ လူနေမှုဘဝတွေကို မြင်ရပါမယ်။ပြင်သစ်ရဲ့လှပတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့ အတူ အချစ်၊ လိင်ကိစ္စ၊စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဒါတွေကိုပါ လေ့လာခွင့်ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီးရဲ့ဖက်ရှင်တွေကလည်းမိန်းကလေးတိုင်း သဘောတွေ့စရာ ဖြစ်မှာပါ။အပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ ၁၀ ပိုင်း ရှိပါတယ်။အတွဲ – ၁ အနေနဲ့ ထွက်လာတာ ဖြစ်တဲ့အတွက်အတွဲ – ၂ ဆက်လာဦးမယ့်သဘောပါ။
IMDb – 7.4/10 ရထားပြီး လတ်တလောမှာလူကြိုက်များနေတဲ့ နာမည်ကြီး စီးရီးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(Cm Dexer) Small Size ~ Download
(Yoteshin Poatal) Small Size ~ Download
Nineteen: Shh! No Imagining! – Link 2
Monamour (Link 2)
The Good Doctor (Season 2) ၊ အပိုငျး (၇)